Qeybtii 3. sheekadii iska kay ilaw – dhugasho
maxamedsheekafguun Juunyo 1, 2018 sheekooyin
Markii aan gurigeena imid, ayaan bilaabay inaan mar kale is diyaariyo, aniga oo doonaya inaan aado Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta, oo aan ka shaqeyn jiray, si aan u soo guto shaqadeydii maalinikaas oo aan afartii saac ee hore fasax ka ahaa.
Maalinkaas waxa uu ahaa maalin baal ka galay taariikhdeyda, habeenkii markii aan sariirteyda dul imid, oo aan gama’ is lahaa ha sheegin. waxaan bilaabay inaan ka fekero dhacdadii maanta iyo la kulankii Istar, waxa ay noqotay arrin qalbigeyga aan ka saari waayay, waxa qalbigeyga ku soo noq noqonayay, ayaa waxa ay ahaayeen quruxda rabi uu ku maneystay gabadha iyo Indho la’aanteeda, waxaan is iri “hadii indhaheedu u caafimaad qabi lahaayeen, maxaa la isku dili lahaa!”, waxaan kale oo aan is weydiiyay suurta galnimada ah, in indhaheeda la daweyn karo”, hase yeeshee su’aashaasi waxaan u dhigtay kulanka aan ku balan sanahay aniga iyo ayada.
Habeenkaas waaga waxa uu iigu baryay ka fekerka Istar iyo marxaladda nololeed oo ay ku sugan tahay, waxaan dareemayay in qalbigeyga ay ku soo noqnoqanayeen erayadii na dhex maray, ma garan karin waxa ugu wacan, oo ay sidaasi saameynta iigu yeelatay durbaba, laakiin waxaan ogaa kaliya in habeenkaasi ay qalbigeyga ka xanibtay dhaq dhaqaaqyadii kale, oo iyada un iyo ka fekerkeeda aan waqti badan ku lumiyay.
Maalmo ayaa ka soo wareegay la kulankeygii Istar, waxaana maalmahaas wax weyn iska bedeley dabcigeyga, oo feker uun baan ka bixi waayay, Waxaa iga yaabay Aabahay Xaaji Maxamed, Hooyadey Maryam iyo labadeeda Ayeeyo ee Hooyo iyo Aabe kala dhalay, iyo Walaalkey Anas, kuwaasi oo la yaabanaa is bedelka igu dhacay.
Si kastaba, waqtigii ayaa gurmay, waxaana la gaaray habeen Talaado ah, 7:00 fiidnimo oo gow ah, waa xilligii aan ku madaleysnaa guriga Istar, inta aan is habeeyay baan gaarigeygii ku dhacay, waxaan abaaray gurigii Istar. Runtii markii aan tagay guriga, ayaan deymo u galay guriga, waxa uu ka turjumayay nolosha hooseysa ee Istar, eegmadiisa waqti isagama aanan lumin’e albaabka ayaa garaacay, waxaana iga furay wiil yar oo Istar la dhashay, “ma joogtaa Istar baan ku iri”, markaasuu i weydiiyay “Ma Xamzaa adiga”, ‘Haa baan ku iri”, isna “soo dhaaf” buu iigu jawaabay.
Waxaa la i geliyay qol laba joodari ay dhex taal, oo jiingad ka sameysnaa, halkaasi oo ay igu sugeysa Istar, markii aan galay baan kula kaftamay “waan ku salaamay quruxleyda”, markaas bay iyada oo xishooneysa wejigana hoos aadineysa si dhoola cadeen ay ku jirto iigu tiri “hh..hh waan kaa qaaday aboowe”.
Salaan iyo kaftan kadib waxaa bilaabaty Sheeko iska caadi ah, waxay inta badan i weydiineysa iguna celcelineysa sababta aan u go’aansaday inaan ula balamo, ulana kulmo, isla markaana aan ula xiriiraayo, anna waxaan u sheegayay inay tahay wax iska caadi ah, barashada aan ayada bartayna ay tahay mid la mid ah tan aan dadka kale barto.
Sheekooyinkaas oo dhan aniga dareen uma aan hayn, waxaana ka fekerayay su’aal qalbigeyga ku taagneyd sida aan u weydiin lahaa Istar, waxaan aad uga cabsi qabay in su’aashaas ay qalbigeeda dhaawici doonto ama qaribi karto hanaanka sheekadii inoo socotay iyada iyo aniga.
Waxay ahaataba, hadaan wax xoogaa is celiyay ayaan ugu dambeyntii go’aan nafsiyeed ku gaaray inaan weydiiyo, waxaana ku iri; “Xaqiiqdii Istarey waxaad tahay gabar aad u wanaagsan, laakin waxaan rabaa inaan” Markii aan hadal halkaasi marinayo ayay iga dhex gashay, ayada oo qosleysa, ina dhaheysa “aniga ma wanaagsani, qof ii muujinaaya inaan wanaagsanahayna adiga un baaba kaa arkaa, ma garanayo waxa jira, indho la’aanta ayaa la igu nacay baan filaaa…kkk…kkk…kkk”.
Runtii erayadaas qalbigeyga ayay dhaawaceen, ilin ayaana indhaheega ku soo istaaagtay, aniga oo isku dayaya inaan u muujiyo inay tahay weli qof lagu xisaabtami karo, oo wanaagsan ayaa ku dhahay; “maya saas ha oran, miyaadan maqal oraahda dhaheysa (qofka wanaagsan dadka wuu ka dhex muuqdaa xitaa haddii uu dhar duug ah wato), marka wanaaga waa qalbiga ee maahan muuqaalka kore, ee niyadaadi wanaaji, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan weligey garabkaaga ahaan doono”, hadii aan intaas ku qalbi qaboojiyay, ayaan u soo laabtay su’aashii qalbigeyga ku taagneyd, waxaana weydiiyay…
Murugo dagaal, duqaydu maxay ka dheheen